साम्राज्ञी शाहलाई बेलायतले भिसा नदिएपछि झरनासँग अष्ट्रेलिया जाने - आयो खबर
२०७४ कार्तिक २० प्रकाशित १४:५९
कात्तिक २०, काठमाडौं । नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई बेलायतले भिसा नै दिएन । साम्राज्ञी मात्र होइन, यूकेले भिसा नदिएका कलाकारको सूची अहिले लामै बनिसकेको छ । साम्राज्ञी यूके जान नपाएपछि चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’को छायांकन पूर्ण रुपमा प्रभावित भयो ।
प्रकाशित | २०७४ कार्तिक २० प्रकाशित १४:५९
सन्थाल समुदायको परम्परागत राजनीतिक संरचना र न्याय प्रणालीः एक परिचय
सरकार छाड्ने समाजवादीको ‘घुर्की’
डा. केसीको अडान सरकारी हेलिकोप्टरमा काठमाडौं नआउने !!